laacibfm.com » Muxuu La Macno Ahaa Sawirkii Uu Xalay Didier Drogba Masraxa Xafladda Kula Galay Kylian Mbappe? Halkaan Ka Akhriso Faah-Faahinta Sheekada.
Muxuu La Macno Ahaa Sawirkii Uu Xalay Didier Drogba Masraxa Xafladda Kula Galay Kylian Mbappe? Halkaan Ka Akhriso Faah-Faahinta Sheekada.
Halyeeygii hore xulka Ivory Coast Didier Drogba ayaa xalay sidii ugu quruxda badneyd u madadaaliyay dadkii kasoo qeybgalay xafladii xalay lagu bixinayay abaalmarinta Ballon d’Or, sidoo kalana wuxuu saxay qalad uu 10-sano ka hor ka galay da’yarka Paris Saint Germain Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe oo 10-jir ah ayaa xaadiray kulan ay Barcelona & Chelsea ciyaarayeen lugta labaad semi final-ka koobka horyaalada yurub sanadkii 2009, wuxuuna markaas doonayay inuu sawir la galo Drogba oo ka mid ahaa ciyaartoydii wakhtigaas ugu wanaagsaneyd kooxdiisa.
Da’yarka ma ogeyn inuu wakhtigaas nasiibkiisa xumaa, wuxuu sawir ka codsaday xiddiga uu markaas jeclaa ee Drogba kadib kulanka, balse kabtankii hore Ivory Coast oo ka careysnaa go’aanadii garsoore ee layaabka lahaa kulankaas ayaa diiday inuu sawir la galo.
Didier Drogba ma aheyn mid taam ah maadaama kooxdiisa laga diiday afar rigoore, waxaana kulanka garsoorayay Tom Henning Ovrebo oo markii dambe qirtay inuu qalad weyn ku sameeyay kooxdii xooganeyd ee Blues.
Toban sano kadib Didier Drogba ayaa dib u saxay qaladkiisa, wuxuuna rumeeyay riyada Mbappe oo hadda ka mid ah xiddigaha soo koraya kuwooda ugu fiican kubadda cagta.
Wuxuu dalbaday in loo dhiibo taleefoonkiisa gacanta ka hor inta uusan Mbappe ka dalban inuu (sawir waji – Selfie) la galo, waxaana sidoo kale kasoo muuqday gabadhii la daadihineysay xafladda Sandy Heribert iyo sidoo kale dhamaan martidii goobta ku sugneed.
Drogba wuxuu kasoo muuqday TV-yada isagoo kulankaas aad uga careysan go’aamada garsoorka kuna tilmaamay xad gudub, Balaugrana ayaana u gudubtay final-ka tartanka markii ay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta gool ka heleen Andreas Iniesta.
Ovrebo wuxuu diiday inuu rigoore u dhigo Blues markii Alves uu xerada ku dilay Malouda, wuxuuna siiyay laad xor ah, xaaladda ayaa sii kacday markii Drogba qudhiisa dhulka la dhigay markii ay hardameen Abidal, wey kasii dartay markii Gerard Pique uu gacanta ku ceshtay kubad lala gudbay, mar kalana Eto’o ayaa gacan ku taabtay kubad uu tuuray Ballack.
“Kuma faani karo bandhigaas” ayuu yiri Ovrebo oo Telegraph mar dambe la hadlay.
Didier Drogba waxaa tartanka yurub laga ganaaxay lix kulan kadib markii uu si toos ah u weeraray garsoorka.